मन्त्री फेरबदलको अन्तिम मा तयारीमा नेकपा। | रेडियो झापा 100.7 MHz.
मन्त्री फेरबदलको अन्तिम मा तयारीमा नेकपा।
रेडियो झापा 100.7 MHz. शुक्रबार, आश्विन ०९, २०७७ १२:१७:३२
०९असोज,काठमाडौ/नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रि मण्डल पुनगर्ठनको अन्तिम तयारीमा लागेका छन्।
त्यसका लागि दुई नेता लगातारभेटवार्ता र संवादमा जुटेका छन् । बिहीबार मात्रै झण्डै तीन घण्टा छलफल गरेका दुई नेताले शुक्रबार पनि भेटवार्ता गर्दैछन् ।
‘दुई अध्यक्षबीच आज हिजोकै निरन्तरतास्वरुप भेटवार्ता भएको हो’,प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले भने, ‘आजको छलफल पछि उहाँहरु टुङ्गोमा पुग्ने सम्भावना छ ।’
सचिवालयले निर्णय नगरेपछि उचित मापदण्ड तय गरेर त्यसैका आधारमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न नेताहरु सहमत हुदै दुवै अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएका थियौ। बिहीबार दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा पनि सबै मन्त्री फेर्ने वा दुई वर्ष पुरा भएकालाई हटाउने र वाँकी राख्ने तथा राम्रा काम गरेकालाई राख्दै अन्यलाई फेरवदल गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल भएपनि निर्णय भइ नसकेको बताइएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्ड दुई वर्ष कार्यकाल पुरा गरेका सवै मन्त्रिहरु फेर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने ओली त्यसो गर्ने पक्षमा छैनन् । प्रचण्डको यस्तो प्रस्तावमा अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि सहमत छन् ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीचको भेटवार्तामा सकभर समावेशी ढंगको नयाँ मन्त्रि मण्डल बनाउनेबारेमा कुराकानी भएको बताइएकोे छ ।
गत आइतबारपछि सोमबार नबसी मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी एकताका सन्दर्भमा १० दिन भित्र ठोस कार्य योजना ल्याउन अध्यक्षद्वय र महसचिवलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै खाली रहेका संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरु संविधानको मर्मअनुसार चाडो गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । ओली प्रचण्डबीचको बिहीबारको भेट वार्तामा समेत यसबारे छलफल भएको बुझिएको छ । ओली र प्रचण्डबीच शुक्रबारको भेटवार्तापछि सचिवालय बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने तयारी छ । स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङले दुई अध्यक्षबीच छलफल भइरहेकाले एक दुई दिनभित्रै मन्त्रिमण्डल पुनगर्ठन हुने बताए ।